Dr. Tint Swe's Writings: January 2018
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းအထိ မုံရွာမြို့ အထက (၂) မှာနေခဲ့တယ်။ အဲဒီကာလက မုံရွာမှာ အထက ၁ နဲ့ ၂ သာရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက မရမ်းရောင်လုံခြည်ဝတ်ရပြီး စတိတ်ဝမ်းက မီးခိုးရောင်ဝတ်ရတယ်။ နောက်မှသာ အကုန်လုံး အစိမ်းဝတ်ဖြစ်လာတယ်။ မရမ်းကနေ အစိမ်းပြောင်းပေမဲ့ စတိတ်တူးက စတိတ်တူးပဲး မီးခိုးရောင်ကနေ အစိမ်းရောင် ပြောင်းပေမဲ့ စတိတ်ဝမ်းက စတိတ်ဝမ်းပါပဲ။ သူ့ကျောင်းဂုဏ်နဲ့သူရှိကြတာက ပြောင်းမသွားပါ။
ကျွန်တော် အရောင်တွေအကြောင်းရေးထားတာ မနည်းတော့ပါ။
1. Changing Political colors နိုင်ငံရေးအရောင်များပြောင်းလဲခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/changing-political-colors.html
2. Colors count အဖြူ-အမည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/colors-count.html
3. Colors for Health အရောင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/colors-for-health.html
4. Colors of Painting ပန်းချီကား၏အရောင်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/colors-of-painting.html
5. Colors of Ribbon ဖဲကြိုးအရောင်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/colors-of-ribbon.html
6. Colors of the Rivers မြစ်တို့၏ အရောင်များ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2017/10/colors-of-rivers.html
7. Colors of your nails လက်သည်းအရောင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/colors-of-your-nails.html
8. Green colors စိမ်းလေဦးမည့် ကျွန်တော်တို့မြေ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/green-colors.html
9. Urine Colors ဆီး၏အရောင်များ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/urine-colors.html
ဖဆပလခေတ်မှာ သန့်ရှင်းပါတီက အဝါနဲ့ တည်မြဲပါတီကအနီ။ ပမညတပါတီက အပြာရောင်။ တသီးပုဂ္ဂလိကကို အစိမ်း။
မဆလခေတ်မှာ သူ့ပါတီအတွက် အပြာနုရောင်သုံးတယ်။ လူထုအတွက်တော့ အဖြူနဲ့ အမည်းအရွေးခိုင်းတာ၊ မည်းလည်း ဖြူသွားစေတဲ့ခေတ်။
အခုထိလည်း လူထုကတော့ အဖြူနဲ့ အမည်းရွေးရဆဲပါ။ ဖြူချင်ရင် ဖြူလို့ရတာတော့ ကွာလာပါပြီ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကတော့ အရောင်တွေ ပြောင်းကြတယ်။ စတိတ်ဝမ်းက ဝမ်း၊ တူးကလည်း တူးပါပဲ။
မြတ်စွာဘုရား ခြေတော်လက်တော်နွေးစေဖို့ သနပ်ခါးမီးပူဇော်တဲ့ ကုသိုလ်ပြုမှုကို ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်ကတော့ တပို့တွဲလပြည့်ညမှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်မှာတော့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးမှာ ဘာလုပ်လုပ် စတိသာလုပ်နိုင်တယ်။
သနပ်ခါးတုံးလေးတွေကို ရှိတဲ့ဓါးနဲ့စိတ်ခွဲရတဲ့အလုပ်ကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ရတာ။ မတော်လို့ ဘယ်ဘက်လက်ညှိုး တချက်ထိသွာလို့ ပလာစတာကပ်ထားရတယ်။
ဘုရားစင်ရှိတဲ့အခန်းမှာလည်း မီးခိုးနဲ့ မီးတောက်ကို ဒေါ်မြမြအေးက ရေခွက်နဲ့ ရပ်စောင့်သင့်ရသေးသတဲ့။
ကန်တော့ပါဆရာ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ သမီ့း့ နက် တနေ့အတူ့့မာ နေခက်မိပါတေဆရာ သူနက့် နေတုန့်း့ ကျွတ်သွားပါတေ သူရဲ့့ ဆေး ၂လုံးနာရီမခြား တိုက်ခက်ပါတေ နောက် ၂ရက်နေတော့ ရာသီ ၂ရက်လောက်လာပီး ရပ်သွားပါတေ ခုထိမလာတော့ဘူး ကြားထဲမာလဲ ဗိုက်ခဏခဏအောင့်လို့့ ဆေးရုံအုပ်နက် တရက်ပြခက်ပါတေ sayama က ဖယ်ရိုဗစ်တို့ သံဓာတ်အားဆေးတို့ ပေးခက်ပါတေ dအတောတွင်း ရာသီမလာရင်ပြန်လာပါလို့ ပြောပါတေဆရာ ဆီးစစ်ကြည့်မေတဲ့ saya သမီးကိုဝန်ရှိနိုင်လားဒေါက်တာ ပီးတော့ dညအဖြူဆင်းတာ ပြည်လိုအရောင်ဖစ်နေပါတေ saya စိုးရိမ်ရလားဆရာ ဗိုက်အောင့်တာ အစာအိမ်ဘက်ကအောင့်တာပါဆရာ ဆရာ့ရဲ့အဖြေကို သမီးစောင့်နေပါတေရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ဆရာ့ကို တောင်းပန်စွာနက်အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ဆရာ
အမှားတွေက များလွန်းလို့ ပို့စ်တခုလုပ်ပါရစေ။
သမီ့း့ နက် = သမီ့း့ နဲ့
့မာ =့့မှာ
နေခက်မိပါတေ = နေခဲ့မိပါတယ်
သူနက် = သူနဲ့
နေတုန်း = နေတုန်း
ကျွတ်သွားပါတေ = ကျွတ်သွားပါတယ်
တိုက်ခက်ပါတေ = တိုက်ခဲ့ပါတယ်
ရပ်သွားပါတေ = ရပ်သွားပါတယ်
ကြားထဲမာလဲ = ကြားထဲမှာလဲ
ဆေးရုံအုပ်နက် = ဆေးရုံအုပ်နဲ့
တရက်ပြခက်ပါတေ = တရက်ပြခဲ့ပါတယ်
ဆေးတို့ပေးခက်ပါတေ = ဆေးတို့ပေးခဲ့ပါတယ်
ကိုဝန် = ကိုယ်ဝန်
dအတောတွင်း = ဒီအတောတွင်း
ဆီးစစ်ကြည့်မေတဲ့ = ဆီးစစ်ကြည့်မယ်တဲ့
အရောင်ဖစ်နေပါတေ = အရောင်ဖြစ်နေပါတယ်
ပြောပါတေ = ပြောပါတယ်
တောင်းပန်စွာနက် = တောင်းပန်စွာနဲ့
စောင့်နေပါတေရှင့် = စောင့်နေပါတယ်ရှင့်
စာအရေးအသားကို ထောက်ပြတဲ့အခါ မကြာမကြာ ကွန်မင့်တွေလာတတ်တယ်။ တိုင်းရင်းသူထင်တယ်လို့။
Doctor ရှင့်အောက်မှာ ရခိုင်တင်တယ်လို့ပြောသူ ၃ ယောက်တွေ့ရတယ်။ နေရပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်က မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးတော့ မသိ။ မမေးပါ။
တချို့ရွှေဗမာတွေထက် မြန်မာစာတော်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်။ မြန်မာစကားကြွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသာတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးထဲမှာ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဥပမာ ဥပမေယျတွေ ပုံတိုပတ်စတွေနဲ့ စကားပြောတတ်တယ်။
တချို့ကပြားတွေကလည်း ဗမာအစစ်တချို့ထက် ယဉ်ကျေးတဲ့မေးခွန်းတွေလာတယ်။ တိုင်ဝမ်မှာနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တယောက်ကို နမူနာပေးထားတယ်။
၁။ ဆရာ မြန်မာစာ သတ်ပုံအကြောင်း မေးချင်လို့ပါ။ စိတ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့တွဲရေးတဲ့ စိတ်သန်ဒန်လို့ အသံထွက်တဲ့ စကားလုံးရဲ့ မူရင်းသတ်ပုံ အမှန်ကို သိချင်လို့ပါခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ကလေးက သုံးနှစ်ခွဲပါ သံကြေဆေးတိုက်ရင်းဖျားနေလို့ ဆက်တိုက်လို့ရပါသလားရှင် သံကြေဆေးက သုံးရက်တိုက်ခိုင်းထားတာပါ တရက်ပဲတိုက်ရပါသေးတယ်
၃။ ဆရာအဲ့ဒါဆို ညဉ့်နက်သန်ကောင်ကအမှန်လား။ သန်းခေါင်ကျော်အချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတွေ့နေရလို့။
၄။ ဆရာခင်ဗျာ ဝသန်မိုးနဲ့ ဝဿန်မိုး ဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲ
ဝသန် (မိုး) ရာသီ၊
သဏ္ဌာန် (ပုံပန်း၊ လုံးရပ်၊ အသွင်အပြင်)၊
အဝသာန် = အဝသာန = အဆုံး
ခုနစ်စင်ကြယ်ပြောင် အမြီးထောင် သန်ကောင်ချိန်သို့ရောက်ခဲ့ပြီ။
စိတ်သန္တာန်၌ ကိလေသာအညစ်အကြေးရှိ၏ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ထိုကိလေသာအညစ်အကြေးကို ပယ်ရန်အလိုဆန္ဒကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်၊ အားထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်၊ လုံ့လစွမ်းကို ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်။
တမြန်နှစ်က မိတ်ဆွေအိမ်မှာ ဧည့်သည်လုပ်ပြီး၊ လက်ဖက်သုပ်စားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ကို ကိုတရုပ်ကြီးလို့ခေါ်ပေမယ့် သူကဗမာ။
ကုလား၊ တရုပ် အခေါ်အဝေါ်တွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခုခေတ်မှာ မဟုတ်တာတွေက များတယ်။ ဝေါဟာရနောက် လိုက်ကြသူတွေကတော့ အလွန့်အလွန်များတယ်။ တောနက်ကြီးထဲတွန်းပို့ခံရတော့ မျက်စိလည်ကုန်ကြရော။ တချို့မှာ ပြန်မထွက်နိုင်ကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ နာမည်နောက်မှာ ပညာဘွဲ့ကိုသာ ထည့်တယ်။ အဲတာလည်း အမြီးတိုတယ် ရှည်တယ် ခေါ်ကြတယ်။ ခုခေတ်မှာက အမြီးကုပ်သလား ထောင်သလား။ ကျွန်တော်လည်း ကုပ်နေရတာ၊ အေးလွန်းလို့။
ဓါတ်ပုံထဲက ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ်စာ ပိုပြီး အိုစာလာကြပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ သပြေပန်းတွေ အမြဲလန်းပါစေသတည်း။ မျက်စိလည် ပျောက်ကြပါစေသည်း။
စာရေးတာမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်လိုနေရာမျိုးမှာ ခပ်လွယ်လွယ် ခပ်ပါ့ပေါ့ရေးကြတာကို ဗွေမယူပါ။ ရယ်စရာသဘော ရေးကြတာလည်း ထောက်ပြရန်မရှိပါ။ ဘန်းစကားဆိုတာလည်း ခေတ်တိုင်းမှာရှိတာ။ ပြောစရာရှိတာတွေက တမျိုး။
မူရင်းစာအုပ်တွေ စာတွေကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုသတ်ပုံပြင်ပြီး ရောင်းစားကြတာကို ပြောပါတယ်။ မှန်နေပြီးသား သတ်ပုံတွေကို ပေါ်လစီအရ ပြောင်းခိုင်းတာမျိုး၊ မူကွဲရှိနေတာကို ပုံသွင်းတာကိုလည်း သဘောမတူပါ။ ခေတ်လို့ ဆင်ခြေပေးကြတယ်။ ခေတ်ဆိုတာ ပိုပြီး လွယ်ကူရှင်းလင်းစေရတယ်။ အဆင့်စာလုံးတွေ ပါဠိစာလုံးတွေ နည်းစေရတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ စသတ်ခိုင်းတာ။ မနှစ်လုံးဆင့်ခိုင်းတာ ခေတ်သဘောမဟုတ်ပါ။ ခေတ်သဘောမှာ စာလုံးသစ်တွေပေါ်တယ်။ ဘာသာခြားစာလုံးတွေ၊ နည်းပညာစာလုံးတွေတိုးလာတယ်။ အဲတာတွေမှာ အသံထွက်ကို အနီးစပ်ဆုံးယူမှသာ သင့်တယ်။ အာထွာဆောင်းကို စောင်းလို့မရေးရ။ ဆူပါကို စူပါလို့ မရေးရ။
ဖေ့စ်ဘွတ်မှရေးတာနဲ့ ဆရာဝန်ဆီ ကျန်းမာရေးမေးတာ မတူသင့်ပါ။ လေးစားရမယ်၊ ရိုသေကျိုးနွံရမယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ယဉ်ကျေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ မေးခွန်းဟာ ဖတ်တာနဲ့ ဆိုလိုချက်ကိုတော့ သိစေသင့်တယ်။ သတ်ပုံမှားတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်လွဲတာတွေရှိတယ်။ အဲတာမျိုးကို ဖြေမရပါ။
ဆရာသားဥကြွေဆေးစားပြီးဖင်ကလေးတန်းရလားဆရာရေးတာကို ၃ ခါလောက်ဖတ်တော့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါ။
လူတိုင်း အိပ်ရာထဲမှာ ညဝတ်နဲ့နေကြတယ်။ ဧည့်ခန်းထွက်ရင် ကပိုကရို မသင့်။ အိမ်ပြင်ထွက်ရင် တင့်တင့်တယ်တယ်။ အလှူ မင်္ဂလာဆောင် သွားတော့ ကြော့ကြောမော့မော့ ဝတ်စားကြရတယ်။
တချို့ရေးကြတာတွေက အင်္ကျီကြယ်သီးပေါက်လွဲတပ်ထားသလို။ ရင်ပတ်လုံရင်တော့ တော်သေးတယ်။
ဆရာရှင့် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်တလခွဲဘာဖြစ်နိုင်လဲရှင့် ကလေးကိုထိခိုက်နိုင်လား စောမွေးနိုင်လားရှင့်။
အသက် ၂၇။ ကိုယ်ဝန် ၁၁ ပတ်ပါ။ လငပုတ်ဖမ်းကြည့်လို့ရမရ ကလေးထိခိုက်နိုင်လား ဆရာ။ စိုးရိမ်မိလို့ပါ။
ငလျင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်နှစ်တောင်ရှိသလဲ။ လမင်းကြီးအောက်မှာကော ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဘယ်နှစ်သန်းရှိသလဲ။
၁။ ဆရာ ကျတော့ကလေးက ၉လ ရှိပါပီ ဝမ်းသွားတာ ၅ရက်ရှိပါပီ အန်လည်း အန်ပါတယ် အန်တာတော့ ပြောက်ပါပီ ပီးတော့ ကလေးက နို့လည်း သိပ်မသောက်ဘူး ပိန်လာပီး ကလေးတွက် ဝမ်းသွားနေချိန်မှာ vitamin ဆေး သို့မဟုတ် အားဆေး တခုခုတိုက်ချင်ရင် ဘာဆေးတိုက်ရမလဲဆရာ ကလေးက နို့သောက်တာလည်း အရမ်းနည်းသွားတယ် ပိန်လည်းပိန်နေပာပီ
ရရစ်မပါတာ ၆ လုံးတိတိ။ ပါပြီလို့ရေးရ။ ပါပီ = ခွေးကလေး။
ပါပြီလို့ရေးရ။ ပါပီ = ခွေးကလေး
၃။ ဟုတ် ကျေးဇူးပါ ဆရာ ဖတ် ပီးပါ ပီ
ပါပြီလို့ ရေးရပါတယ်။ ပါပီဆိုရင် တမျိုးဖြစ်သွားပြီ။
မေးခွန်းတွေကနမူနာသာ။ နေ့တိုင်း ၄-၅-၁ဝ ခုလာတယ်။ ရရစ်မပါတာတွေ။
ပီလာ = ဧကန်မုချ
သီချင်းကို ပီပီသသသီဆိုလို့ ပြီးပါပြီ။
အဆီအငေါ်မတည့်ဘူး ပြောကြမှာပဲ။ စာသင်နေတဲ့ဆရာမတယောက်ကနေ ဆရာဝန်ကို မေးခွန်းတခုမေးတယ်။ ကျန်းမာရေး မဟုတ်ပါ။
ဆရာမ = ဆရာ အနုပညာရဲ့အဓိပ္ပါယ်လေးပြောပြပါလား။
ဟာ့့ ဆရာက အဲဒီနယ်ပယ်မှာ ဆရာမလုပ်နိုင်ဘူးနော်။ ဆေးပညာကိုသာ သိတယ်။
ဆရာမ = ဆရာ့့ တကယ်သိချင်နေတာ။ တနေ့က နိုဘယ်မြန်မာစာပေဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်က ဘဝအနုပညာတဲ့ ဘုရားဟော တရားတွေကလည်း အနုပညာတရားလို့ ဆိုပါတယ်။
ညက အိပ်မပျော်ခင် စဉ်းစားနေခဲ့သေးတယ်။ ပန်းဆယ်မျိုးနဲ့ စာပေတွေကနေ ဘာသာရေးကို အနုပညာနဲ့ ပုံဖေါ်နေတာတချို့ဟာ ကြည်ညိုစိတ်ကဲလွန်စေပြီး၊ အစွန်းမလွတ်တာတွေ၊ သွေဖီတာတွေလည်းဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။ ဆက်တွေးအုံးမယ်။ ရေးဖြစ်မလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဘာသာရေး ရေးရတာမှာ အတော် သတိထားရမယ်။
ဆရာမ = ကျမလေ အနုပညာရဲ့တိကျတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိချင်လာတယ်။ ကျမမှာက စွယ်စုံကျမ်းမရှိဘူး။
မြန်မာအဘိဓာန်ကိုကြည့်တော့ စာပေဂီတ၊ ပန်းချီစသော နူးညံသောအရာလို့ပဲပါတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ၁ဝ မျက်နှာ ရှိတယ်။ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြေးမုံဖြစ်သည်တဲ့။ အနုပညာဆိုတာ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ ကြံရည်ဖန်ရည်၊ ဓလေ့စရိုက်၊ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းတို့ကို ထင်ဟပ်စေသည်။ လူ့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေနိုင်သောပညာ၊ စေတနာအလျှောက် စိတ်ကူးဥာဏ်ဖြင့် ဖန်တီးရသောပညာ၊ အနုပညာကို ခံစားရသူတို့မှာ ရသကိုဖြစ်ပေါ်လာစေလို့ ရသပညာလို့လည်းခေါ်တယ်။
ဆရာမ = ခံစားမှု အကောင်းအဆိုး အားလုံးအကျုံးဝင်မှာပေါ့နော်။
ဟုတ်။ ဆရာ မုံရွာစတိတ်တူးမှာနေရတုံးက ရုပ်ရှင်မင်သား ထွန်းဝေလာတော့ ပြောသွားတာ ကြားလိုက်တယ်။ အနုပညာဆိုတာ အတုပညာတဲ့။ အနုပညာအစွမ်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်၊ ဝမ်းနည်း၊ ကရုဏာသက်၊ စက်ဆုပ်၊ အားတက်၊ ထိန့်လန့်၊ အံ့သြ၊ တည်ငြိမ်၊ စတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်။ အဲတာတွေကို အလင်္ကာလို့လည်းခေါ်တယ်။ စိတ်အရသာ (ကိုးပါး) လို့လည်း ခေါ်တယ်။ သိပ္ပံပညာကနေ အသိတရားကို ဖေါ်ထုတ်ပေးတယ်။ အနုပညာကနေ စေတနာကို လှုံ့ဆော်နှိုးဆွပေးတယ်။ သိပ္ပံပညာက အကြောင်းတရားကို ရှာဖွေပေးပြီး၊ အနုပညာက အကျိုးတရားကို ဖွဲ့ပြတယ်။ အနုပညာကို ပါဠိလို သုခုမပညာလို့ခေါ်တယ်။ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဗိသုကာ၊ သဘင်၊ အတီးအမှုတ်ပညာတွေလည်း အကျုံးဝင်တယ်။
ဆရာမ = တရားတွေကိုရော အနုပညာလို့ ပြောလို့ရသလားဆရာ။
ရှေးစကားတခု ထပ်ကိုးကားပါအုံးမယ်။ မုံရွာ စတိတ်တူးကျောင်းကိုပဲ ရန်ကုန်ဘဆွေလာပြီး ပြောဟောတယ်။ သူက လက်ဝဲသမားနဲ့တူပါရဲ့ နတ်ပြည်ဆိုတာ မြင့်မိုတောင်ထိပ်မှာရှိတယ်ဆိုရင် နတ်ဦးရေ ဘယ်လောက် နေနိုင်မှာလဲလို့ ဝေဖန်တယ်။ ကိုးတန်းကျောင်းသား စဉ်းစားရတာပေါ့။ မိလိန္ဒပဥှကိုဖတ်မိတဲ့ အရွယ်ရောက်မှ သစ်သားချောင်းတခုထဲကို သံမှိုရိုက်သွင်းတဲ့ဥပမာ တွေ့လာခဲ့တယ်။ သူဝေဖန်တာကိုလည်း တဖက်သတ်တော့မမြင်ပါ။ ဘာသာတရားစာပေတွေကို ရေးဖွဲ့ကြသူတချို့ လွန်ကဲတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ စာပန်းချီလို့တင်စားတာမျိုး။ ဖတ်မိသူ၊ ကြည့်မိသူ၊ နာကြားရသူတွေရဲ့ စိတ်ကို အလွန်အကြူး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး ကဲလွန်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပေးတယ်။ စေတနာတော့ အမှန်ဖြစ်ပါမယ်။ သင့်မှန်တယ်မထင်ပါ။ မြတ်စွာဘုရား ပထမဆုံး ဟောခဲ့ရတဲ့တရားတော်ဟာ အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဘိဓမ္မာ မလာသေးဘူး။ ရန်ကုန်ဘဆွေကပါပဲ သုံးထပ်သားပြားပေါ်မှာ သစ်ပင်ပုံ ဆွဲပေးပါတယ်။ ပင်စည်မှာ သောက်ရေအိုးတလုံး ထားပေးလိုက်တော့ အားကစားလုပ်ကြလို့ မောပန်းနေကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အမောပြေစေတယ်။ တကယ့်ညောင်ပင်က ရေချမ်းစဉ်မှာသောက်ရသလို ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းတယ်မဟုတ်ပါလား။
• စာမတတ် လမ်းဖတ်၊ ဇာတ်ပွဲကြည့် အသိတိုး။
• အမြင်မတော် သင်ပေး၊ လမ်းပေါ်ပညာရေး။
• မသေချာရင် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတင်၊ အမြင်မတော် ပြင်ပေး၊ အွန်လိုင်းပညာရေး။
ကျွန်တော် မှားတာ၊ ကျနေရစ်တာတွေကို စေတနာနဲ့ထောက်ပြပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူး။ ကျွန်တော်ရေးလို့ ကျန်းမာရေး၊ သုတနဲ့ မြန်မာစာ ဘယ်နှစ်ယောက် အကျိုးရစေသလဲတော့ မသိ။ ဘလော့ရတာတွေကတော့ ၃ဝဝ တိတိရှိ။ ဆောရီး။
သတင်းတချို့ထွက်တိုင်း ဘလော့စရာ ပေါ်လာစမြဲ။ မနှစ်ကဒီနေ့မှာ ၅ဝဝဝ ထဲက ၃ နေရာလျော့သွားတယ်။ ကနေ့တော့ ၁ ယောက်လျှော့။
တချို့ကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သူတို့ဖတ်နေချိန်လေးမှာ သူတို့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကို ကျွန်တော်ပါ လိုက်ရေးတာ မတွေ့ရင် ဒီမှာ ဒါဖြစ်နေတာတောင် မသိဘူးလားတဲ့။
ဆရာ့ကို မတွေ့တာကြာပြီလို့ ရေးလာသူတွေဆီ ရွာထိပ်ကမန်ကျည်းပင်ကြီးအကြောင်း ပြောပြောပြနေရသလို ပြောရအုန်းတော့မှာပဲ။
ခိုင်းနွားကြီး မြက်စား စမြုံ့ပြန်နေတာသာ မြင်ကြတယ်။ မလင်းခင်က လယ်တဧကကို ထွန်ပေးခဲ့တာကို မသိကြဘူး။
င ငရုပ်စိမ်း စိပ်ရှိန်းရှိန်း
ဇ ဇရပ်မှာ တည်းခိုပါ
တ တလင်းဝယ် စပါးနယ်
ထ ထမနဲ တပို့တွဲ
ဓ ဓနိပင် အသုံးဝင်
ဖ ဖရုံပေါ တို့ယာတော
မ မမ အဖေါ်ရ
ဝ ဝလေး ဝိုင်းဝိုင်းရေး
အ အလံ အောင်ပွဲခံ
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်တန်းတုန်းကတော့ က ကစွန်းပင် ရေမှာရွှင်လို့ သင်ခဲ့ရတယ်။ နောက်မှာ က ကညစ် ပေမှာခြစ် လာတယ်။ ဇာတိရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကညစ်ကို ခဏလေးသုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ကန်စွန်းပင်လို့ ရေးကြတာတွေရှိတယ်။ ကစွန်းက ကန်မဟုတ်တာမှာလည်း ပေါက်တယ်။ ယာကစွန်းရှိတယ်။
နောက်မှာ က ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် ဖြစ်လာတယ်။ အဲတာကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ အခုခေတ်မှာ ကလေးကို ခလေးလို့ ရေးနေကြတယ်။
ခ ခရမ်းသီး ဓါးနဲ့လှီးကနေ နောက်မှာ ခ ခရာ အသံသာ။ ခရမ်းသီးကို တချို့က ခါးရမ်းသီးလို့ ထင်ကြတယ်။ နရသီဟပတေ့မင်းဟာ အစားကြူးယုံသာမက အိပ်ယာထတာနဲ့ အနားမှာရှိတာတခုခုနဲ့ မထင်ရင် ကောက်ပေါက်သတဲ့။ အဲတာနဲ့ အမတ်တွေက သူ့နားမှာ ခရမ်းသီးတောင်းထားပေးရတယ်။ ခရမ်းသီးစာထိမှန်ခံရတဲ့ အပျိုတော်တွေ ခါးရမ်းသွားလို့ ခါးရမ်းသီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီး ပါးစပ်ရာဇဝင်ရှိတယ်။ မဖြစ်နိုင်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဂ ဂဏန်း ရေမှာဖမ်းမှာ ကနန်းကသာမှန်တယ်။ ပ ပလောင် ဒို့ညီနောင်၊ ဖ ဖယုံပေါ တို့ယာတောမှာ တို့ နဲ့ ဒို့ နှစ်မျိုး ဖြစ်နေတယ်။ တို့က အမှန်။ ဒို့က အသံ။
ဘ ဘယက် ရွှေဒေါင်းခွက်၊ အခုခေတ်မှာ ဘယက်ကို သိပ်မသိကြတော့ပါ။ ယ ယမင်း ပပဝင်းမှာ ပုံက ရုပ်သေးပုံ ဖြစ်နေတယ်။ ယမင်းဆိုတာ လှပသောမိန်းမငယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အ အလံ အောင်ပွဲခံဖြစ်လာတာက ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်။ ခရာမှုတ်အမိန့်ပေးစနစ်ကို ဦးစားပေးတဲ့ခေတ်။ အဲတာက အခုထိ သည်အတိုင်းပဲ။ အောင်ပွဲခံကြရပြီလား။ ဗ ဗလ အင်အားပြလား။
တပို့တွဲလပြည့်နေ့မှာ လ လမင်း ထိန်ထိန်လင်းပါစေသတည်း။
၁။ ဆရာ ခုတော်တော်များ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှားတွေကို မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင် မှားလာလို့ အမှားကိုအမှန်ထင်လာကြပြီလားမသိ ဘူးဆရာ။ ဥပမာ ယုံကြည်မှုကို ရုံကြည်မှုတို့ဆိုတာ အတွေ့များလာပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ ယုံ ရုံ ရုန် အသုံးကို ရှင်းလင်းစွာသိချင်လို့ပါ ဒီလောက်လေး လုပ်နိုင်ယုံ/ရုံ/ရုန် လေးနဲ့ လက်ကို သေနတ်ကျည်ဆံ ရှပ်မှန်ယုံ/ရုံ/ရုန် လေးနဲ့။
၃။ ရုံမျှ နှင့် ယုံမျှ ဘယ်ဟာအမှန်ပါလည်းဆရာ။ လွမ်းသင့်ရုံမျှ / လွမ်းသင့်ယုံမျှ ပူဆွေးရုံမျှ / ပူဆွေးယုံမျှ တမ်းတမိရုံ / တမ်းတမိယုံမျှ ဘယ်ဟာအမှန်ပါလည်း ဆရာ။ ကျွန်တော်က စာတိုပေစလေးတွေ ရေးတဲ့အခါ စာလုံးပေါင်းမှားမှာ အလွန် စိုးရိမ်မိလို့ပါဆရာ။ ကျွန်တော့်အလုပ်ကလည်း စာသင်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ အရမ်းသတိထားရလို့ပါဆရာ။ အမေးအမြန်း ထူတယ်လို့ မယူဆပါနှင့်ဆရာ။
တော်ရုံသင့်ရုံ၊ နေသာရုံလို့ သတ်ပုံစာအုပ်မှာပါလို့ လွမ်းသင့်ရုံမျှ၊ ပူဆွေးရုံမျှ၊ တမ်းတမိရုံတွေက မှန်ပါမယ်။
၄။ ဆရာမင်္ဂလာပါ။ ယုံ ရုံ ရုန် အသုံးကို ရှင်းလင်းစွာသိချင်လို့ပါ။ ဒီလောက်လေး လုပ်နိုင်ယုံ/ရုံ/ရုန် လေးနဲ့ လက်ကို သေနတ်ကျည်ဆံ ရှပ်မှန်ယုံ/ရုံ/ရုန် လေးနဲ့
လုပ်နိုင်ရုံ၊ ရှပ်မှန်ရုံတွေက မှန်ပါမယ်။ ရုန်အသုံး မရှိပါ။
၁။ ဆရာ ခုတော်တော်များ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှားတွေကို မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင် မှားလာလို့ အမှားကိုအမှန်ထင်လာကြပြီလားမသိဘူးဆရာ။ အစမ်းမလုပ်ရကို အဆမ်းမလုပ်ရတို့ဆိုတာ အတွေ့များလာပါတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၅၁ပါ။ ရာသီလမမှန်တော့ပါဘူး။့့ ဆီးစပ်ကခဏခဏကိုက်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ဗိုက်ထဲကလည်း နာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ ထူးစမ်းနေပါတယ်။ (ထူးဆန်းလို့ ရေးရတယ်။)
ပုစ္ဆာန်း = နတ်ထိန်း နတ်ဝင်
အထည်ယက်၊ အထည်ရက်၊ ကွန်ယက်၊ ကွန်ရက် မှားတတ်ပါသေးတယ်ရှင်။
မစား ရက် မသောက်ရက်
ကွန် = ပိုက်
ကွန် = ပျံကြွ၊ တက်ကြွ၊ လွင့်မြောက်သည်
ကွန်ချာ = ကွန်ရွက် = ကွန်ယက် = ဇာ
တူမတယောက်က မသီတာ (စမ်းချောင်း) ရဲ့ စာအုပ်ဖတ်ရတဲ့အကြောင်းရေးတာ တွေ့တယ်။
အေ့း့ ဆရာ ညမအိပ်ခင်က ရသစာမေးလို့ ရေးလိုက်တယ်။ တချို့ရသသမားတွေကတော့ သဘောတူကြမှာ မဟုတ်။ ကိုယ့်တသက်တာမှာ စာအုပ်ထဲကဇာတ်လိုက်တွေရှား။ သူလို ကိုယ်လိုလူတွေသာများတယ်။
အဲ့့ ဆရာဝန်သက်တမ်းမှာ ဂျော်နီရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးခရီးရှည်မှာ ဗေဒါပင် ရှိတယ်။ ဖိုးမောင် ရှိတယ်။
ခွဲစိတ်ဓါးကိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဓါးတောင်ကို မကျော်ဖူးပါ။ ချင်းတောင်သာ ကျော်ဖြတ်ဖူးတယ်။ မီးပင်လယ် မကူးရ။ ဒုက္ခသမုဒ္ဒရာမှာတော့ အခုထိ။ အဲတာမျိုးက လူတိုင်းမဟုတ်လား။
ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေထဲက နေရာတွေမှာ အကြာကြီးနေရဆဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သမိုင်းထဲရောက်နေပြီ။ ထုံမွန်း ဖွဲ့နွဲ့ခံရမှာတော့ ကြောက်တယ်။
မိုးခိုတယ်ဆိုတဲ့စကား ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သွားရင်းလာရင်း မိုးရွာနေလို့ အသိအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းဇရပ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခွင့်တောင်းပြီး ခေတ္တခဏမိုးခိုနိုင်ကြတယ်။
အခုနေတဲ့အရပ်မှာ စကားလုံးသစ်တခုတိုးလာတယ်။ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတယောက် ဖုန်းဆက်ပြီး အမရှိလား၊ ကျမ နှင်းခိုချင်လို့ ဝင်ခဲ့အုန်းမယ်တဲ့။ အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေတာကိုး။ ကနေ့တော့ နှင်းက ကျလိုက်၊ ရပ်လိုက်။
နက်ဖြန်တော့ နေသာမယ်လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ အသိပေးတယ်။ ဒီမှာက အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပတ်၊ အီးမေးတွေကို အမှန်အတိုင်း ပေးထားရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်က ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ရဲ့ မိုးလေဝသဖိုးကပ်စ်အရ အသိပေးတာပါ။
စောစောက တယောက်ပြောတာကြားမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက အသက်ကို ထုတ်မပြောကြဘူးတဲ့။ သေမင်းက သိသွားမှာ စိုးလို့တဲ့။ အော့့် ဒါကြောင့် မေးခွန်းတွေမှာ အသက်မပြောကြတာကိုးလို့ သိရတော့တယ်။
ဒါပေမယ့်ဗျာ ကျွန်တော်က သေမင်းမှ မဟုတ်တာ။ အသက်ကယ်နိုင်ရင် ကယ်ချင်တဲ့ ဆရာဝန်ပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ အသက်ပြောပြီး မိုးခိုခို၊ နှင်းခိုလို၊ လေခိုခို။
ဆရာ ဂါဝတရားလား၊ ဂါရဝတရားလား မရှင်းလို့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က မုံရွာမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီရေးတာတခု ဖတ်မိတယ်။ ဟိုတနေ့ဆီက ကျွန်တော် ထမင်းစားနေတုန်း သုံးတန်းတပည့်မလေးတယောက် စားပွဲအနီးက ဖြတ်သွားတယ်။ ကိုယ်လေးကို ကိုင်းညွတ်ပြီး ဆရာကြီး စားပြီလားရှင့်လို့လည်း လောကဝတ်စကား ဆိုသေးတယ်။ သူက သောက်ရေ သွားသောက်တာပါ။ ပြီးတော့မှ ရေတခွက်ကို ခပ်ယူပြီး ကျွန်တော် ထမင်းစားနေတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ တရိုတသေ တင်ပေးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် အံ့သြသွားပါတယ်။ သုံးတန်းတက်မယ့် ကလေးမလေးတစ်ယောက်ထံက ဒီလောက် မြင့်မားတဲ့ ဂါရဝ၊ နိဝါတ ကိုယ်ကျင့် တရားကို ဘယ်မျှော်လင့်ထားမိပါ့မလဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် လန့်တောင် လန့်သွားမိတယ်။
ဂါရဝတရားနဲ့ သောက်ရတဲ့ သောက်ရေတခွက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးအတွက်ပါ အဟာရဓါတ် ပေးဆောင်ပါတယ်။
အပေါ်က ကဗျာလေးကို စဆုံးဖတ် ချင်ပါသည်။
• မှိုင်းညို့ညဉ့်ရိပ်၊ လူခြေတိတ်၌
• ရေဆိပ် အနား၊ ရွာတံခါးမှ
• ဂုတ်ကျား ကျယ်လောင်၊ ဆီးကြို ဟောင်သော်
• ဖိုးမောင်လာပြီ ဆိုကြသည်။
• ထက်ကြပ်ပေါ်လာ၊ အသံမှာကား
• ညခါ ငါးထောင်၊ မောင်ဖိုးမောင်သည်
• ရွာတောင်ချောင်းက ပြန်ခဲ့ပြီ။
• ဖိုးမောင်သံကြား၊ ကင်းသမားက
• တံခါးကြီးအောက်၊ မလွယ်ပေါက်ကို
• တယောက်ဝင်သာ၊ ဖွင့်လိုက်ပါသော်
• ယာတွင် အုပ်ဆောင်း၊ ဝဲ တက်ချောင်းနှင့်
• ခါးစောင်း ကိုယ်ကိုင်း၊ ငါးပလိုင်းကို
• လွယ်သိုင်းပြီးလျှင်၊ ရွာကိုဝင်သည်
• လူပင်လေလား၊ တစ္ဆေလား။
• တစ္ဆေမကြောက်၊ မြွေမကြောက်ပဲ
• တယောက်တည်းပင်၊ ညဉ့်မှောင်တွင်၌
• သူလျှင် ငါးရှာ၊ မကျွေးပါက
• ထိုရွာသူသား၊ လူအများတို့ 
• ငါးစို ငါးစိမ်း ငတ်ပေလိမ့်။
• သူတို့အဆုတ် ထားခဲ့မြှုပ်သည့်
• ဗုံးငုတ်တိုက်မှား မောင်ပြောက်ကျားကို
• ရွာသားရွာသူ မေးကြမြူသည်
• အူအူယမ်းငွေ့ထတုန်တည်း။
• အမောင်ပြောက်ကျား၊ ချစ်သူအားကို
• ဘာများ မှာခဲ့လိုသနည်း။
• ငယ်ကကြင်မြတ်၊ မိသက်မှတ်ကို
• ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါလေ။
• အမောင်ပြောက်ကျား၊ မိဖအားကို
• မွေးသည့်မိခင်၊ မွေးဖခင်ကို
• ဦးတင်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါလေ။
• အမောင်ပြောက်ကျား၊ တိုင်းပြည်အားကို
• ခရီးမတ်တပ်၊ လမ်းခုလတ်တွင်
• ကိုယ်လွတ်ရှောင်ခွာ၊ ခွဲရပါ၍
• အားနာခဲ့ကြောင်း ပြောပါလေ။
• ယမ်းငွေ့အူအူ၊ တလူလူနှင့်
• မေးမြူကြတုန်း၊ အနောက်ကုန်းတွင်
• နေလုံး ကွယ်လေပြီတကား။
ဆရာမင်းသုဝဏ် ရေးသားသီကုံးခဲ့တဲ့ကဗျာတွေမှာ တတွေကို မလိုအပ်ဘဲ တစ်လုပ်မထားပါ။
• အမောင်ပြောက်ကျား၊ ကဗျာစာရေးသူများကို ဘာများ မှာခဲ့လိုသနည်း။
• ခရီးမတ်တပ်၊ လမ်းခုလတ်တွင် သတ်ပုံမှန်အောင် ရေးပါလေ။
၁။ တရားစာတခု တွေ့တယ်။ အကြိုက်ကို မပါယ်နိုင်သမျှ သင်သည် အပါယ်ကြိုက်သောဘဝမှ မလွတ်မြောက်နိုင်ပြီလို့ ရေးထားတယ်။ ပယ်နဲ့ ပါယ် ရောထွေးနေတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ မဟာဗောဓိပင်မှာ ဘုရားရှင် (ကိန်းဝပ်စံပါယ်) (ကိန်းဝပ်စံပယ်) (ကိန်းဝပ်စံပ္ပယ်) တော်မူနေသည်။ ဘယ်ဟာ မှန်ပါသလဲဆရာ။ (ကိန်းဝပ်စံပါယ်) အမှန်လို့ထင်ပါတယ်။ သိပ်မသေချာလို့ပါခင်ဗျ။ နောက် စံပါယ် နဲ့ စံမြန်း သဘောတရား ဘာကွာပါသလဲဆရာ။
၃။ စပယ်ပန်းအောက်မှာ တယောက်က စပါယ်လို့ထင်ခဲ့ကြောင်းရေးတယ်။
၄။ မေးခွန်းတခုက အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ် မေးတယ်။
စပယ်ပန်း (အရင်က သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာမှာ စ စပယ်ဖြူ မွှေးကြူကြူလို့ရေးတယ်။ စံပယ်ပန်းလို့လည်း အရင်ထုတ်သတ်ပုံမှာရေးတယ်။)
ပယ်တဆဲ့ခြောက် (ပယ်တစ်ဆဲ့ခြောက် မဟုတ်ပါ)
အပယ်မိဘုရား (ယခင်သတ်ပုံစာအုပ်တအုပ်မှာ မိဖုရား မဟုတ်)
စားပြီးဆော့နေ ပန်းကန်အိုးခွက်ဆေးကြောတာ မသိကြချေ
ကျောင်းသွားနေ လည်ပတ်နေ ဈေးသွားငါးဝယ် မသိကြချေ
ဇရာ အနာ ဝေဒနာ ညည်းညူသံ မတွက်ပေ
အမေ နေ့စဉ် နေကောင်းကျန်းမာနေ
တသက်တခါ ထွက်သွားချိန်မှာ အနားမှာ မရှိကြပါလေ့့